Cali Cabdala Saalah oo la dilay – Bosaso Times News
admin December 4, 2017 Cali Cabdala Saalah oo la dilay2017-12-05T06:55:25+00:00 Puntland, somali News No Comment
Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay dileen hogaamiyihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax. Warbaahinta ku hadasha codka Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay soo af jareen waxa ay ugu yeereen kooxdii dhibta waday ayna dileen hogaamiyahoodii khiyaanada sameeyey.
Dhowaan ayey ahayd markii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax uu ku dhawaaqay inu diyaar u yahay inuu la heshiiyo xulufada uu Sucuudigu hogaaminayo taas oo keentay in Xuutiyiintu ay weerar ku qaadaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee Yemen.
Arinta dilka Cali Cabadalla Saalax ayaa muujinaysa awooda ay leeyihiin kooxda taageerada ka hesha dalka Iran ee shiicada ah, laman oga waxa ka dhalan doonta dilka Cali Cabadalla Saalax.
http://www.bosasotimes.com/cali-cabdala-saalah-oo-la-dilay/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/12/salah6.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/12/salah6-150x150.jpg 2017-12-05T06:55:25+00:00 adminPuntlandsomali NewsAlii Abdalla Salah,Bosaso times,SC,YemenXuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay dileen hogaamiyihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax. Warbaahinta ku hadasha codka Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay soo af jareen waxa ay ugu yeereen kooxdii dhibta waday ayna dileen hogaamiyahoodii khiyaanada sameeyey. Dhowaan ayey ahayd markii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax uu ku...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Alii Abdalla Salah, Bosaso times, SC, Yemen
« Diyaar Garow dagaal oo ka dhexsocda Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka.
Dawladda Maraykanka oo u raraysa safaaradeeda Qudus una aqoon sanaysa caasimada Yuhuuda »